« Village de la Francophonie » : miantoka ny asa hatramin’ny farany ny Seimad | NewsMada
« Village de la Francophonie » : miantoka ny asa hatramin’ny farany ny Seimad
Mandeha ny asa fanamboarana ny « Village de la Francophonie » eny Andohatapenaka amina velaran-tany 7 ha. Nanamafy ny toky nomeny tamin’ny voalohan’ny taona ny tompon’andraikitra ao amin’ny Seimad, izay miantoka ny asa hatramin’ny farany, omaly, fa tsy maintsy ho vita amin’ny volana oktobra ny asa, iray volana mialoha ny fandraisana ny fivoriambe. Trano lehibe telo, misy rihana 5, 7 sy 10 no hatao eny an-toerana. Trano hipetrahana, fandraisana fivoriana, fijerena sarimihetsika. Samy mandeha daholo ireo asa ireo amin’izao fotoana izao.Ankoatra ny hipetrahana misy efitra 420, ny trano fivoriana afaka mandray olona 700 hatramin’ny 800. Satria ny frankofonia misy lafiny toekarena, tsy hadino amin’ireo fotodrafitrasa ireo ny toeram-pivarotana lehibe ho an’ny vahiny sy mpizahatany. Ho hita amin’izany toeram-pivarotana izany ny asa tanana sy ireo vokatra eto Madagasikara samihafa.
Mbola ny Seimad ihany koa manitatra ny asa eny amin’ny CCI Ivato, ao anatin’ny fandraisana ny frankôfônia. Malagasy daholo no miantoka ny asa manomboka amin’ny fanaovana mari-trano. Fotodrafitrasa mipetraka daholo ireo ho tombontsoan’ny firenena, raha misy ny fikojakojana azy amin’ny taona rehetra manaraka. Izay lafiny fikojakojana izay no tsy ampy na tsy misy mihitsy amin’ny fananam-panjakana.
Koa mba hisorohana ny fahavoazana any aoriana, toy ny hita amin’ny fananam-panjakana maro ankehitriny, tokony ho fantatra mazava manomboka izao, iza marina ny ho tompon’andraikitra amin’izany fiantohana fananam-panjakana izany. Sao vita ny fandraisana ny fivorian’ny frankofonia, ho kikisan’ny volana sy ny taona eo ireo nandaniam-bola be ireo.